Download CDBurnerXP u Mac ay gubaan DVD Saxannada (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Download CDBurnerXP u Mac ay gubaan DVD Saxannada (Mavericks oo ay taageerayaan)
CDBurnerXP waa software free si ay u gubaan CD-yada iyo DVD-yada. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u gubaan xogta laga hayo (audio, video, files ISO) si CD ama DVD. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa in aad nuqulka audio iyo xogta laga disc ama masixi content ka cajalladaha rewritable. Si kastaba ha ahaatee, CDBurnerXP waa barnaamijkii la Microsoft Visual Basic .net, sidaa daraadeed waxa kaliya ee ay maamushaa in Windows. Si aad u gubi CD ama DVD aad Mac (libaax buurta, libaax ka mid ah), waxaad u baahan kale ah CDBurnerXP u Mac.
Halkan ayaan u Khushuucdo Dartiis talinaynaa Wondershare Video Converter Ultimate for Mac (Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 taageeray), taas oo ah video iyo DVD madadaalada xalka oo dhan-in-mid ka mid ah Mac. Sidaa daraadeed, aad u bedeli karaan, qoraaga iyo gubi video iyo ISO files si DVD u ciyaaro on TV. Koobiyo DVD content in computer sidoo kale waa la heli karaa. Waxaad xitaa kala soo bixi kartaa online video inay DVD. Sii tijaabo ah oo lacag la'aan ah hadda.
Features Key ee CDBurnerXP u Mac (Mountain Libaaxa taageeray)
Maadaama aanu xitaa ka fiican yahay CDBurnerXP u Mac, Video Converter Ultimate for Mac qoreysa hawlaha soo socda:
1. Dhammaan-in-mid xal u ah diinta, qoraalka, gubasho, dooxeen, duuban, iwm
2. Ma gubtay oo kaliya DVD, laakiin sidoo kale luxay DVD in video for Mac, iPhone, iPad, iPod iyo
3. Kuweeda video & audio iyo ka AVI, wmv, MP4, MOV, FLV, MKV iwm
4. Downloads videos web si fudud oo dhaqso
5. Waxay abuurtaa filimada 3D ka video kasta oo 2D ee Mac
6. Waxaa ka mid ah wax ku ool ah qalab video tafatir sida beddesha, Dalag, goo, Cinwaan, iwm
Sida loo isticmaalo CDBurnerXP u Mac Alternative
Haddaba bal fiiriya sida sahlan waa in aad isticmaasho Video Converts Ultimate u Mac (libaax buurta taageeray) in qoraaga iyo gubi videos in DVD.
Talaabada 1: Load video, audio ama ISO DVD files
Marka aad furto barnaamijka, waxaad arki doonaa daaqad la kala dooranayo, Beddelaan, Guba, oo Download. Door "Guba" in la furo suuqa kala hoose, oo aad markaas jiidi karaan jeedi files barnaamijka. Edit faylasha video haddii loo baahdo qalab ay ka mid yihiin goo, dalagga, ganaax-Gurtida, watermark iyo Cinwaan.
Talooyin : Si aad nuqul DVD, doortaan "Copy DVD" ee dhinaca kore ee bidix ee interface ugu muhiimsan oo aad markaas ku shuban kartaa DVD files ka kombiyuutarka. DVDs leh ama aan lahayn ilaalinta nuqul ayaa labadaba la taageeray.
Ka hor inta gubanaya, waxaad samayn kartaa SuperDrive, DVD Folder, .dvdmedia, ama ISO Files. Halkan DVD cajalid xusho oo ay gubaan files xogta si DVD ah ee la ciyaaro DVD ciyaaryahanka. Waa inaad sidoo kale ku siin magac in disc DVD oo wuxuu muujin doonaa marka disc la galiyo si drive ah. Ugu dambayn, guji "Guba" si ay u bilaabaan gubanaya video / audio in DVD. Bar Horumarka ayaa kuu sheegi doona wakhti intee le'eg ayaa weli ah.
Fiiro Gaar ah : Waxa ugu wada hooseeya ee suuqa hoose, waxaa jira fursado si ay u astaysto aad DVD menu, muuqa iyo tayada video. Beddel goobaha kuwaas oo ku haboon baahidaada.
Free download CDBurnerXP u Mac:
CopyTrans u Mac - qalabka ugu fiican si ay u gudbiyaan Music, Playlists, Videos